Kismaayo News » Jubbaland oo uruurinaysa gaadiidka sumad la’aanta ah
Jubbaland oo uruurinaysa gaadiidka sumad la’aanta ah
Kn: Maamul gobolleedka Jubbaland ayaa go’aan adag ka soo saaray gaadiidka taariko la’aanta ah ee ku sugan deegaamada Maamul gobolleedka Jubbaland.
Go’aanka ka soo baxay Jubbaland ayaa markiiba dhaqan galay, waxayna waaxda taraafikadu bilawday qaqabashada gaadiidka aan sumadda lahayd ee jidadka maraya. Sida ay noosheegeen saraakiil maamulka ka tirsan waxaa jiray go’aan hore oo maamulku uu gawaarida ku amrayay inay mudo ciyaman ku qaataan taarikada kadibna waxaa hadeer la dhaqan galiyay in ciddii aan taariko wadan ee gaadiid ku dhex wadanaysa deegaamada Jubbaland talaabo laga qaado.
Magaalooyinka waawayn, gaar ahaan Kismaayo ayaa ku dhib qabay gaadiidka taariko la’aanta ah, waxaana marar badan dhacda darawaliinta oo si xawli ah u wada inta dhibgaystaan ay hadana goobta ka baxsadaan, sidaasi darted in sumad looyeelo waxay sahlaysaa in gaariga la aqoosado oo markaasi qofka ku diiwaan gashan ee mulkiilaha ah lagula xisaabtabo dhibkii lagu gaysto gaarigiisa. Waxay sidoo kale wax ka taraysaa amaanka iyo la xisaabtanka gaadiid leyda.
Waxaa kale oo naloo sheegay inay arintani ku xigi doonto wadayaasha baabuurta oo ayagana lagu soo rogi doono inay imtixaan dhinaca wadista ah maraan isla mar ahaantaana qaataan shatiga wadista gaadiika. Haatan majiro wax xakamaynaaya inuu qofku gaadiid ku wado bartamaha magaalada xaataa hadii uusan horay u aqoon maadaama uusan jirin sharci qabanaya laakiin bixinta aqoonsiga wadista iyo sumad u yeelista gaadiidka waxay kor u qaadaysaa amniga iyo xasiloonada waxayna kobcinaysaa dawladnimada.